Igbo, John: Lesson 010 - Izuzu nke Chineke pụtara ìhè n'ime mmụọ nke (Jọn 1:14-18) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 010 (The fullness of God in Christ)
N'ihi na esitere n'aka Moses nye iwu Chineke. Obiọma na eziokwu ahụ sitere n'aka Jizọs Kraịst. 18 Ọ dighi onye ọ bula huworo Chineke mb͕e ọ bula.Ọkpara amuru nání Ya, Onye nọ n'obi Nna, Onye ahu kọrọ Ya.
Ihe di iche n'agbata Agba Ochie na agba ohu nwere ike igbakwasi ihe di iche n'etiti ezi omume site n'iwu na ezi omume site na amara. Chineke nyere Moses Iwu Iri ahụ, iwu gbasara àjà ọbara na iwu maka iweta iwu n'ime ndụ. Onye chebere iwu ndị a metụtara ndụ. Ma onye ọ bula nke mehiere megide otù onye nime ha kwesiri ọnwu. N'ụzọ dị otú a iwu ahụ bụ ikpe ọnwụ, n'ihi na ọ dịghị mmadụ zuru oke. Ndi mmadu kachasi nma na ndi mmadu bu ndi ezi omume na agbaghagharia na iru ugha n'iru iru oru apughi ime nke idebe iwu nile nke Iwu ahu. Otú ọ dị, ndị nkịtị, na-ewere onwe ha dị ka ndị dị mma, dị ka a ga-asị na ndụ ha na-atọ Chineke ụtọ. Nke a mere ka ha ghọọ ego, na iwu iwu. Ha chefuru ịhụnanya ha na-etu ọnụ na ezi omume nke ịchọ ọdịmma onwe ha. N'ezie, Iwu ahụ dị ka nke dị nsọ n'ihi na ọ na-egosipụta ịdị nsọ nke Chineke. Ma n'ihu ya nwoke ọ bụla na-ele ihe ọjọọ anya. N'ụzọ dị otú a, Iwu ahụ na-eduga anyị ná nhụsianya na ọnwụ.
N'elu ikuku a nke nadakwasi onwu onye nkwusa ozioma John kwuru banyere Jizos Kraist na mbu nime ozioma ya dika onye ngbaputa na ngbasi na onye nzoputa site na iwe Chineke. Nwoke ahu Jisos sitere na Nazaret bu Kraist ahu ekwere na nkwa ahu nke ejijuputa na Mo Nso. Ọ bụ Eze ndị eze, Okwu Chineke na Nnukwu Onye Nchụàjà. Ọ bụ nchịkọta nke ohere niile maka olileanya na nzọpụta.Kraist abiakutegh ayi site n'usoro iwu ohuru, kama obu na o gbaputara ayi site na nkọcha nke Iwu ahu. O jiri ịhụnanya na-enweghị atụ ya mezuo iwu niile anyị chọrọ. O buru mmehie anyị na ikpé megide ụwa n'ubu ya, si otú a mee ka anyị na Chineke dịghachi ná mma. Chineke abugh onye iro ayi n'ihi nmehie ayi, ma ayi anatawo udo n'ebe Chineke no site na Jisos Jisos. Nwoke ahụ bụ Jizọs rịgooro Nna ya nke eluigwe wee wụkwasị anyị mmụọ nsọ Ya. O nwere mmasị n'iwu ahụ n'obi anyị, na-ejupụta echiche dị ọcha, eziokwu na nsọpụrụ anyị. Anyị agakwaghị ebi n'okpuru Iwu, mana Ọ nọ n'ime anyị. N'ụzọ dị otú a, Chineke enyewo anyị ike iji mezuo ihe ndị ịhụnanya ya chọrọ.
Na ọbịbịa Kraịst, afọ amara malitere, anyị bi n'ime ya. Chineke adịghị ajụ n'aka anyị onyinye, ọrụ ma ọ bụ àjà iji mee ka ezi omume onwe anyị sie ike, mana o zitere Ọkpara ya ka o nye anyị ezi omume nke Chineke. Onye kwere na ya bu ihe ziri ezi. N'ihi nke a anyị hụrụ ya n'anya ma kelee ya ma nye anyị àjà dị ndụ nye ya n'ihi na o doro anyị nsọ.Kraịst ahapụghị anyị dị ka ụmụ mgbei mana anyị na-anọnyere anyị, ọ wụpụkwara anyị onyinye ya. Ayi ekwesighi ka mgbaghara nke nmehie anyi, ma obu ndi ozo nke Mo Nso nke Chineke. Anyị enweghị onyinye ọ bụla ma ọ bụ ngọzi ọ bụla si n'aka ya. Ihe niile bụ amara si n'aka ya. N'ezie, anyị enweghị ihe ọ bụla ma e wezụga iwe na mbibi. Mana site na nmekorita anyi na Kraist site n'okwukwe, ayi aburu umu Chineke ndi o nyere onyinye ya. Ị ghọtara ọdịiche dị n'etiti ndị ohu nke mmehie na ụmụ amara?Nmere a abughi obi nke obi nime Onye nke nso. Kama nke ahụ, ọ bụ ịhụnanya dabere na ikike ikpe. Chineke apụghị ịgbaghara onye ọ bụla ọ chọrọ, n'ihi na mmehie onye mmehie ahụ chọrọ ọnwụ ya ozugbo. Otú ọ dị, crucifixion nke Kraịst n'ọnọdụ anyị emewozu ezi omume nile. Ya mere, amara aghọwo ihe ziri ezi maka anyị na ebere nke Chineke bụ eziokwu nke a na-agaghị eme ka ọ maa jijiji. Grace n'ime Kraist bụ ihe ndabere iwu maka ndụ anyị na Chineke.
Ị na-ajụ: Ònye bụ Chineke a, nweere onwe ya ime ihe, ma agbụ ya ikpe ziri ezi? Anyị na-aza gị: Ọtụtụ okpukpe ejirila obi ike ma jiri obi ike chọpụta Chineke. Ma, ha dị ka ụzọ nkwụsị n'elu ụwa nke na-apụghị iru n'eluigwe. Ma Kraist di ka uzo Chineke nke si n'elu igwe ridata, nke edoro n'elu uwa. Nzukọ anyị na Chineke site n'aka ya anaghị eme ka mmadụ nwee obi nkoropụ.Ọ dịghị mmadụ hụtụrụla Onye Okike ebighi ebi, n'ihi na mmehie anyị na-ekewapụ anyị site na Onye Nsọ. Okwu nile banyere Chineke abughi nani okwu efu. Ma Kraist bu Okpara ya, ya na Chineke site na mgbe ebighebi, ot'nime ihe nke Chineke. Ya mere Okpara mara onye Nna bu. Ngosipụta nile gara aga bụ ezughị ezu. Mana Kraist bu okwu zuru oke nke Chineke, na nchikota nke eziokwu nile.
Kedu ihe bụ isi nke ozi Kraịst?
Ọ kụziiri anyị ka anyị gwa Chineke okwu n'ekpere dị ka nke a, "Nna anyị nke nọ n'eluigwe". Site n'ụzọ a nke ịgwa Chineke okwu, ọ gwara anyị na ihe kachasị mkpa Chineke bụ nna ya. Chineke abụghị onye ọchịchị aka ike, onye mmeri ma ọ bụ onye nbibi. Ma ọ bụ na ọ bụ enweghị mmasị na enweghị mmasị. Ọ na-eche banyere anyị dị ka nna na-eche banyere nwa ya. Nwatakịrị a ga-ada n'ime apịtị ahụ, ọ na-adọpụ ya, na-asacha ya ma ghara ịhapụ ya ka ọ ghara ịla n'iyi n'ụwa ikpe ọmụma. Ebe ọ bụ na anyị amarala na Chineke bụ Nna anyị, ahụhụ anyị na-eche na mmehie anyị ebutewo. N'ihi na site n'ịlaghachikwute Nna anyị, anyị nwetara nchacha na nnabata. Anyị na Chineke dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Mgbanwe okpukpe nke mebiri n'ụwa anyị n'aha nke Nna bụ Onye Kraịst ọhụrụ chere na Kraịst wetara. Aha nna a na-ejide nchịkọta okwu na ọrụ Kraịst.
Tupu Kraist abia, ya na Nna ya no. Ngosipụta a dị nro na-akọwa mmekọrịta ịhụnanya n'etiti Kraịst na Chineke. Mgbe ọ nwụsịrị ma kpọlite Ọkpara ahụ laghachikwute Nna ya. Ọ bụghị nanị na ọ nọdụrụ ala n'aka nri nke Chineke kamakwa ọ nọ n'obi Nna ahụ. Nke a pụtara na ya, onye ya na ya, ọ bụ ya. Ya mere okwu nile nke Kraist banyere Chineke bu eziokwu. Na Kraist anyị na-ahụ onye Chineke bụ. Dika Okpara di, otua bu Nna, dika Nna di otua, otua bu Okpara.
EKPERE: Nna anyị nke bi n'eluigwe anyị na-eto ma na-ekele gị, n'ihi na ị zitere anyị Kraịst Ọkpara gị ọ hụrụ n'anya. Anyị na-akpọ isiala nye gị n'ihi na ị napụtara anyị na nrọ nke Iwu ahụ ma kụọ anyị n'ime ezi omume nke Chineke. Anyị na-ekele gị maka onyinye ime mmụọ ọ bụla, na-ebuli gị elu n'ihi ihe ùgwù anyị nwere na Nnagị.
Olee echiche ọhụrụ Kraịst kpọbatara n'ụwa?
Page last modified on March 05, 2020, at 05:33 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)